Wayyaneen: Ajaaiba dhugaa Oromoo ajeesanii fixuu dadhabnaan Loon Eegalan! – Kichuu
HomeAfaan OromooWayyaneen: Ajaaiba dhugaa Oromoo ajeesanii fixuu dadhabnaan Loon Eegalan!
Wayyaneen : Ajaaiba dhugaa Oromoo ajeesanii fixuu dadhabnaan Loon Eegalan!!
DhaamsaAmboo-“Wayyaneen mana barumsaa tokko terget gootee jirti.sochii qabsoo barattoota Amboo tiif adda dureen isaani jettee farrajjee itti seenuuf shira xaxaa jirti.
Opdon barattoota mana barumsaa Amboo sad 2 ffaa kisoosee Iddoo Liban (Awwaaroo) keessa galuun mallaqa ramadanii karaa barsiisoota fi barattoota muraasa gurra opdo ta’ani hojetaniin fayyadamun barattoota gareen walitti buusaa jiru.
-Baadiyaa fi magalaan
-Gandaan kkf taniin waltti buusa jiraachuu isanii kessa beekittonni ifa godhanii waan jiraniif barattoonni keenya shira opdo kana beektanii irraa of qusatanii dhamsa keenya nuuf dabarsaa.”
Mesfin Fayisa Robi, Waa’ee Aktivistoota Oromoo, Jijjiirraa Tarrtiiba Qubee, sirna Habashaafi Oromummaa, Feesubuukiifi Marsariitii caccabsuu Warra “Oromo Hackers” fi namoota isaaniin ijaare, Waa’ee Savaafi Sablammiifi Hiree Oromoyaafi kasaaraa siyaasaa, madda dhufaatii qubeefi dhuftee Afaan Amaaraaffi kkf irratti marii sa’a 3:25 bilisummaa guddaatiin taasifne kana dhaggeeffadha. Waliifis daddabarsaa…carraa arganne hundumaan kijibdootafi gantoota uummata Oromoof nisaaxilla. https://m.facebook.com/story.php…
Ajaaiba dhugaa Oromoo ajeesanii fixuu dadhabnaan Loon Eegalanii ??!!
Godina_Shawaa_kaabaa Aanaa kuyyuu Ganda Aamumaa Wucaaletti 04/10/09 qoricha silmii horii too’atu jechuu dhaan horii irratti biifame miidhaa geechisee jira. horii itti biifame 7 battalatti kan ajjeese yoo ta’u namoota biifaa turan 3 ammoo battalatti gara mana yaalaa waan geeffamaniif lubbuun isaanii baraaramuu danda’e jira. Wayyaaneen Gama hundaan Ilmaan Oromoo fixuuf karoora ishee itti fufee jirti.